Beds nyebar-HF29011 misy amboradara tady fahagola, Sina Beds nyebar-HF29011 miaraka amina mpanamboatra amboradara tady fahagola, mpamatsy, orinasa - Zhejiang Rancho Santa Fe trano lamba Co., Ltd
Model Number: HF29011
PREMIUM QUALITY FABRIC - Ity lambam-pandriana malefaka tsara ity dia noforonina ho manam-pahaizana ary novokarina avy amin'ny fitaovana avo lenta sy mateza hipetraka moramora sy hikolokoloana ny hoditra rehefa hipetraka amin'ny torimaso mandry sy mamerina amin'ny laoniny isaky ny alina. Ny stitching embossed haingon-trano dia manome endrika mahazatra tsy misy ezaka, avy hatrany. Ity farafara farafara faran'izay lafo vidy ity dia ny accent tonga lafatra amin'ny efitrano fandriana na any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
LAVISH DESIGN & COLORS & FUNCTIONS - Ity singa marobe sy tsy manam-potoana ity dia tonga amin'ny loko vanim-potoana voafantina 3 miaraka amina endrika marindrano ankehitriny izay azo atao amin'ny fotoana tsy voafetra ary azo ampiasaina ao amin'ny efitrano fandriana, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny na efitrano fandraisam-bahiny. Izy io dia manana ny fijeriny somary ambany, monochromatic ary mitondra singa amin'ny antsipiriany sy fahaizany ao amin'ny efitrano..Ny farafara fandriana dia maivana ampiasaina amin'ny toetr'andro mafana, fa mitazona azy ihany koa amin'ny alina mangatsiaka.
BEDSPREAD PREMIUM REHETRA
Mora be ny mikarakara azy io. Izy io dia azo esorina amin'ny milina amin'ny rano mangatsiaka miaraka amin'ny loko mitovy amin'izany. Atsofohy amin'ny hafanana ambany. Aza mamotsy - Tsy Mihena - Tsy Mihemotra !! Namboarina haharitra ela be raha tazonina araka ny tokony ho izy. Tsy lavorary ho an'ireo ankizy manana biby fiompy sy ankizy, ny loko fanoherana ny volony sy ny volon'ny biby fiompy. Ny fitaovana avo lenta dia ny pilina sy ny fahamendrehana ary tsy mihena amin'ny fanasana.
Ny kalitao avo lenta sy serivisy ho an'ny mpanjifa mahafinaritra. Ny vokatray dia misy kalitao avo lenta avo indrindra miaraka amin'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa 100%. Fikarakarana mora sy mora amin'ny hoditra. Ny fitaovana fanasan-damba mora dia mamorona fanavaozana ny fandriana mahafinaritra izay tsotra sy tsy misy olana hikarakarana azy amin'ny fampiononana sy fanamorana ny trano.
Lamba vita amin'ny landihazo 100% vita pirinty
Malalaka mavokely geometrika fandriana-HF29026